कोही चोइटिएर जालान् तर कम्युनिस्ट पार्टी फुट्दैन : माधव नेपाल – Kite Sansar
९ साउन, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आफूसँगै आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने मुर्खता नगर्न नेताहरुलाई चेतावनी दिएका छन् ।
पुष्पलाल श्रेष्ठ र नरबहादुर कर्माचार्यको स्मृति दिवसको अवसरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा नेता नेपालले भने विधिको पालना नगरेर मै स्टेट हुँ भनेर आफूलाई सर्वोपरी ठान्न थालियो भने पतन हुने बताए ।
‘यदि हामी कोही त्यस्तो विचार र प्रवृत्तिमा चुर्लुम्म डुबेको छ भने त्यसबाट उम्कियौं, जोगियौं’ उनले भने, समय त छ तर धेरै ढिला हुन थालिसकेको छ ।’
पार्टी नेता कार्यकर्तामा कम्युनिष्ट पार्टी फुट्छ किन भन्ने चिन्ता रहेको भन्दै उनले पार्टी फुट्दैन बताए । ‘कसैले फुटाउन खोज्यो भने चोइटिएर जाला तर कम्युनिष्ट पार्टी फुट्नेवाला छैन’ उनले भनेका छन् ।
कार्यक्रममा नेता नेपालले राखेको धारणा उनकै शब्दमाः
पुष्पलालले ‘कम्युनिस्ट पार्टी सर्वहारा वर्गको अग्रदल हो, यसले नेपाली समाजलाई रुपान्तरण गरेर समाजवादको दिशामा अगाडि लैजानुपर्छ’ भन्नुभएको थियो । अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको काँधमा त्यही जिम्मेवारी आएको छ । यस क्रममा हामीले धेरै उतारचढावको सामना गरेका छौं । धेरै व्यक्तिहरूले त्याग, तपस्या र बलिदानको अनुपम उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ । नयाँ–नयाँ योद्धालाई अगाडि बढ्न उत्प्रेरित र उत्साहित गर्नुभएको छ । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविकाको विषयलाई बुलन्द गर्दै नयाँ आशाको किरण सञ्चार भएको छ ।
नेकपा मुलुकको राजनीतिको अग्रपङ्क्तिमा उभिएको छ । जनताले नेकपाबाट ठूलो अपेक्षा गरेका छन् । त्यही विश्वासले गर्दा झण्डै दुई तिहाइको मत दिए । अबको प्रश्न भनेको जनताको आशा र अपेक्षा पूरा गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं ? भन्ने हो । यो अपेक्षा पूरा गर्न लागिपरेका छौं कि छैनौं ? लागेका छौं त भन्छौं तर पूरा भएको छ कि छैन ? जनमानसमा कस्तो प्रभाव परेको छ ? जनताका क्रिया प्रतिक्रिया, अनुभूति के छन् ? त्यो हामीले सुनिरहेका छौं कि छैनौं ? जनताको हृदयका स्पन्दनहरू श्रवण गरिरहेका छौं कि छैनौं ? एउटा गम्भीर प्रश्न हाम्रो सामु उपस्थित भएको छ ।
जनताको भावना र चाहना बुझ्नका लागि पार्टी संगठनहरू क्रियाशील छन् कि छैनन् ? कार्यकर्ताहरू परिचालित छन् कि छैनन् ? यी सबै समस्याहरूका विषयमा गम्भीरताका साथ चिन्तन मनन् गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
हामीले आफ्ना जिम्मेवारी राम्ररी पूरा गर्न सकिरहेका छौं कि छैनौं ? त्यसको पनि व्यक्तिगत र संस्थागत आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर समीक्षा गरिरहेका छौं कि छैनौं ? कतै हामी समीक्षाबाट भागिरहेका त छैनौं ? कतै हामी छलफल र बहसबाट भाग्न चाहिरहेका त छैनौं ? आफूले जे सोचेको हो त्योमात्रै सही हो भन्ने कुरा अरूमा थोपर्न त चाहिरहेका छैनौं ? यस्ता प्रश्न हाम्रा सामु आएका छन् ।